I-ZTE's Axon 9 Pro yokuSungulwa e-China ngo-Okthobha | I-Androidsis
UAron Rivas | | IsiTshayina Android, Izaziso, ZTE
Emva kwe-IFA yokugqibela eBerlin, eJamani, apho ii-smartphones ezininzi zaziswa khona, iZTE yenye yeenkampani ezatsala ingqalelo. Kwiteknoloji entsha enomdla ayibonisileyo, akukho nto ingako kwaye akukho nto ingaphantsi, ukuya I-Axon 9 Pro, iselfowuni engekafumaneki ukuba ithengiswe-ubuncinci ngaphandle kweJamani-, kodwa oko kungekudala.
Kungekudala, Inkampani yaseTshayina iqinisekisile ukuba, phakathi ku-Okthobha, iAxon 9 Pro izakufika e-China, ke inyathelo lalo kwilizwe liphela lisondele. Olu lwazi luvela kwisandla sokuvuza okutsha nje kwitheminali kwi-TENAA, eqinisekisa zonke iinkcukacha zeselfowuni yokusebenza okuphezulu.
Ngokwento ebonakaliswe yi-arhente yase-China, i-Azon 9 Pro ilinganisa i-156.5 x 74.4 x 7.9 mm kwaye inobunzima be-179 gram, njengoko sasisazi kakuhle. Yintoni egqithisile, Inesikrini esine-intshi ezingama-6.21 esixhasa isisombululo se-FullHD + sama-2.248 x 1.080 esisombululo sepikseli, Esishwankathelwe kwifomathi yokubonisa eyi-18.7: 9 ngenotshi ethe tyaba ethe tye.
Amandla efowuni anikezelwa yi-chipset eyaziwayo yeQualcomm Snapdragon 845 chipset, Ekhoyo phantsi kwe-hood ye-Axon 9 Pro Ngokudibeneyo, i-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yendawo yokugcina yangaphakathi yinto eqhayisa ngayo. Ngaphandle koko, uluhlu lwe-TENAA luchaze ukuba ine-6 ​​kunye ne-8 GB ye-RAM, kunye ne-64, 128 kunye ne-256 GB yeROM, ebonisa ngokucacileyo ukuba inokuthi ifike kwezinye iindlela ezahlukeneyo zememori. Kwangelo xesha, ixhotywe ngebhetri ye-4.000 mAh exhasa inkxaso yeCharge 4.0 kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo.
I-12 kunye ne-20 megapixel ethe nkqo yokuseta ikhamera ihlala kwiphaneli esemva ye-Axon 9 ProNgelixa inotshi yefowuni igcina i-20-megapixel selfie snapper. Ukongeza koku, kuya kuza ne-Android 8.1 Oreo njengenkqubo yokusebenza. Ezinye zezinye izinto ze-smartphone zibandakanya inkxaso ye-HDR 10, isatifikethi se-IP68, ukubonwa kobuso, kunye nenkxaso yeDolby Atmos.
I-Axon 9 Pro ye-6 GB + 128 GB inexabiso elimiselweyo lama-649 euros kwimarike yaseYurophu. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ixabiso lale modeli liza kuhla e-China. Kwangokunjalo, kulindeleke ukuba, ukuba inkampani iqalise ezinye izinto ezinamandla amakhulu, ezi ziya kuba nexabiso eliphezulu. Yonke into ilindile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-ZTE Axon 9 Pro iza kuphehlelela phakathi ku-Okthobha e-China
Uyijika njani iphambili yefowuni yakho kwi-LED yesaziso